dual-interface ကိုစမတ်ကဒ်ကိုဖတ် Module,4SAM ကိုပေါက်, ISO7816 စံ PSAM Card ကို, ISO14443-3,4CPU ကိုကတ်
dual-interface ကိုစမတ်ကဒ်ကိုဖတ် Module,4SAM ကိုပေါက်
module / အင်တင်နာ4CPU ကိုကတ်,4SAM ကိုပေါက်, dual-interface ကိုစမတ်ကဒ်ကိုဖတ် Module, ISO14443-3, ISO7816 စံ PSAM Card ကို
dual-interface ကိုစမတ်ကဒ်ကိုဖတ် Module အတွက် micropayment စျေးကွက်အတွက်အထူးဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ ISO14443 Type A နှင့်အတူသဟဇာတဖြစ် & Type B နှင့် Sony Felica protocols များ, အဓိကအဖြစ် PSAM ကဒ်နှင့်အတူလုံခြုံရေး encryption ကို system ကိုဝန်ထမ်းနှင့်ငွေပေးငွေယူလုံခြုံရေးမြင့်မားသောဘွဲ့နှင့်အတူပြီးစီးခဲ့သည်သေချာ.
ပံ့ပိုးမှုစံချိန်စံညွှန်း: က ISO / IEC14443-A / B, ISO ကို 7816
ပံ့ပိုးမှုကတ်များ: Mifare 1k S50 / 4K S70 / Ultralight, Mifare Pro ကို, FM1208, Sony က felica, SAM ကိုကဒ်
induction အကွာအဝေး: 0~ 100mm
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: 7~ 24VDC
ဆွေမျိုးစို: 30%~ 95%
antenna အရွယ်အစား: 104X67mm သို့မဟုတ် 120X120mm
SMRDM228 dual-interface ကိုစမတ်ကဒ်ကိုဖတ် Module အထူး micropayment စျေးကွက်အတွက်တီထွင်နေသည်. ဒါဟာ ISO14443 Type A နှင့်အတူသဟဇာတဖြစ် & Type B နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏လျှောက်လွှာနှင့်နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီလုံးဝ Sony က Felica protocols များနှင့်, အဓိကအဖြစ် PSAM ကဒ်နှင့်အတူလုံခြုံရေး encryption ကို system ကိုဝန်ထမ်းနှင့်ငွေပေးငွေယူလုံခြုံရေးမြင့်မားသောဘွဲ့နှင့်အတူပြီးစီးခဲ့သည်သေချာ. RS232 ရွေးနိုင်သည်, အိမ်ရှင်စက်နှင့်အတူအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်သွားရန်ကို USB သို့မဟုတ် TCP / IP ကို ​​interface သည် Modes.
SMRDM228 Reader ကို-စာရေးဆရာဆို IC ကဒ် related လျှောက်လွှာထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်အပေါင်းစည်းမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်လိုအပ်သော Front-End Process ကိရိယာ. ကျနော်တို့အပြည့်အ interface ကိုဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်အလယ်တန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးပေး. ဒါဟာမြေအောက်ရထားလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုများသက်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်, ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်များရောင်းအား, ပန်းခြံ entry ကိုလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုများ, လက်မှတ်များ၏စစ်ဆေးခြင်း, ရေနံဘူတာထဲမှာဖြည့်ရေနံ, စက်မှုဇုန်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု, ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြားလယ်ကွက်.
ISO14443A / B ကိုထောကျပံ့, ချိတ်ဆက်မှုကဒ်, ISO14443-3 /4CPU ကိုကတ်များနှင့် SAM ကိုကတ်များ, ISO7816 နျ Standard PSAM ကတ်များ
NFC ကို function ကို support
interface：RS232, TTL(UART), ယူအက်စ်ဘီ, TCP / IP
အွန်တင်းနား: ပြင်ပအင်တာနာ, optional ကိုနှစ်ခုစံအင်တင်နာ configurations (အခြားအရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ：2.7V ကို ~ 5.5V
operating အပူချိန်အကွာအဝေး -20 ℃ ~ + 70 ℃
built-in ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း PSAM module တစ်ခု, တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခု PSAM ကတ်များကိုထောကျပံ့
ISO7816 စံနှင့်အညီ PSAM ကဒ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်
နှစ်ခု LED မီးလုံးများနှင့်တစ်ဦးဉသြသံ control port ကိုပေး
ISO14443-3 /4နှင့် ISO7816 ဆက်သွယ်ရေး protocol များကိုထောက်ပံ့
စက်မှုဇုန်-တန်း Micro-processor ကိုအသုံးပြုခြင်း
စာတိုက် & တယ်လီကွန်း
ဘတ်စ်ကား & Metro ဘူတာ
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် dual-interface ကိုစမတ်ကဒ်ကိုဖတ် Module စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို,4SAM ကိုပေါက်
prev: NFC ကိုနှစ်မြှုပ်ထားသောဖတ် Write Module, UART, TTL interface ကို, ISO ကို 14443A / B, A / C, Android အတွက်, POS ငွေပေးချေမှု
နောက်တစ်ခု: RFID ဆက်သွယ်ပါနှင့်ချိတ်ဆက်မှု dual-interface ကို Reader ကို Module